Ururka dhallinayarada Youth for Somalia YFS oo mashruuc cusb oo wacyi gelin ah ka bilaabay muqdishu. – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ururka dhallinayarada Youth for Somalia YFS oo mashruuc cusb oo wacyi gelin ah ka bilaabay muqdishu.
MAREEG 13 April 2014 4 April 2019
Mareeg.com-mashquuc lagu wacyi gelinayo caruurta iyo ardeyda dhigata dugisya magaalada in ay qaab badbaade leh ku maraan wadooyinka.
Marshuucaan oo ay filineyso ururka dhallinayarada Youth For Somalia YFS ayaa waxaa ka faa iideysan doonaan kumanaan ardey acruur ah oo wax ka barta dugsiya waxbashada ee magaalada muqdishu.
Barnaamijakan ayaa waxaa uu kor loogu qaadayaa wacyiga badbaada iyo ka hortaga dhibaatooyinka shilalaka gawaarida ay u geysataan caruurta iyo ardeyda wax ku barta magalada.
Magaalada muqdishu ayaa waxaa ay ka soo kabaneysaa burburkii dagaalda ka dhacay waxaana jira dadaalo lagu soo nooleynayo wadooyinka magaalada oo ay dhismo ka socdaan waxaa sidpoo kale soo kor dhacaya shilalka gawaairada waxaana jira dad iyaga ku wax yeelooba shilaalkaas.
Mashuuracan ayaa waxaa maalgelinaya heyada Muslim Hands waxaana kaloo ka qeyb qaadanaya dugsiga barshada baabur wadista iyo wada masrita ee Somali deriving and traffic school oo dhanka tilmaaha qeyb weyn ka qaadatay.
Mashrucaan ayaa waxaa uu socondoonaa 50 maalmood waxaana maanta laga sameeye dugisiga hoose dhexe /sare ee macmuur.
Madaxa ururka YFS mudane C/laahi xasan ashcari ayaa sheegay in mashruucan uu yahay midkii ugu horeeye ee nuuciisa ah oo laga fuliyaa muqdishu ayna wadi doonaan arimaan tal la mid ah oo wax loogu qabanyo caruurta iyo ardeyda.
Ugu dambeytii halku dhiga mashruucaya ayaa waxaa lagu sheegay in uu yahay
“Carruurteena iyo ardeyndeena oo wadada si badbaada ah ku mar”
Somali‬ President thanks United Arab Emirates for cooperation on security and development